Villa Somalia oo cabsi kabilaabatay, kaddib markii laba ka mid ah shaqaalaha Guriga Farmajo looga shakiyay "COVID-19" - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Villa Somalia oo cabsi kabilaabatay, kaddib markii laba ka mid ah shaqaalaha...
Villa Somalia oo cabsi kabilaabatay, kaddib markii laba ka mid ah shaqaalaha Guriga Farmajo looga shakiyay “COVID-19”
Sida ay ilo wareedyo ka tirsan Madaxtooyada noo xaqiijiyeen waxaa xanuun loo maleynayo caabuqa CORONAVIRUS la il daran laba ka mid ah shaqaalaha guriga MW Farmaajo ee Villa Somalia.
Labada qof oo mid ay tahay haween midka kalana uu ka mid yahay ilaalada guriga Madaxweynaha ayaa seddexdii maalmood ee u danbeeyay la il daran xanuun leh calaamadaha caabuqa corornavirus.
Waxaa shalay ilaa maanta lala tacaalayaa marawada MW Farmaajo oo iyadana la itaal daran xanuun aan la garaneyn, balse shaki badan ay ka qaadeen shaqaalaha iyo ciidanka waardiyeeya Villa Somalia kaddib markii loo diiday in ka hadlaan xanuunkeeda. Waxaa sidoo kale guriga kula nool hooyada dhashay Madaxweyne Farmaajo oo ah qof da’a
Labada qof ayaa loo diray guryahooda kaddib markii ay sheegeen in uu ku dhacay hargab, waxay ahayd in la geeyo goob lagu karantiilayo ilaa laga ogaanay in waxa haya aay yihiin hargab ama ay qabaan caabuqa coronavirus.
Previous articleMW Farmaajo dano Siyaasadeed owgeed u iibsaday Sumcada Dowladnimada Soomaaliya
Next article(Deg Deg) Qarax ka dhacay agagaarka Madaxtooyada & Rasaas la maqlaayo